Oku Auditing Solar Energy - Nyochaa Mbara Igwe Solar Energy- Kimroy Bailey Group
Ngwa ngwa ị nweta oke ọkụ ị nweta ogo ị nweta ikike ị nweta ikike ị nweta ọkụkụ ma nweta ntụkwasị obi iji mezue akwụkwọ nyocha nke ike anyanwụ.
SKU: KB-OC-002 Categories: Renewable Energy, Usoro nkuzi ume, Mbara Igwe nke Anyanwụ Tag: Ntaneti Ntaneti
Igwe nke Anụla Mbara Igwe ọkụ bụ agụmakwụkwọ elekere 1 nke enyere na ngosipụta. Ọ pụtara na anyị na-eburu gị n'ụzọ nkịtị na nleta saịtị abụọ pụrụ iche, nke a gụnyere gaa na nleta ụlọ na nleta azụmahịa ebe otu ọkachamara anyị nwere enyi na-aga na nyocha nke mbinye aka Kimroy Bailey Group nke Usoro nyocha.
Jiri Igwe ọkụ nke Anụ ọkụ na-elele iji duzie Nnyocha ike ziri ezi
Ọkpụkpụ azụ maka ịmepụta usoro nke otu usoro.
Iwulite ntụkwasị obi nke Onye Okachasi na aka inweta ya na onye ahia gi ma wube mmekorita
Nnyocha ume dị mma na-egbochi nsogbu ndị ọ ga-enwe n'ọdịnihu dị ka size na-ezighi ezi.
Ngosipụta Anụmanụ na mkpụmkpụ mkpụmkpụ.
Tezọ onkụzi Ihe
Nyochaa Homelọ na Nnyocha Azụmaahịa mere site n'aka onye ọrụ ọkachamara na Kimroy Bailey Group
Ihe ndị a nwere ike ibudata dị ka ndenye nyocha anyị maka Nyochaa Homelọ na Audits Azụmaahịa. Nyocha nlele nke ụlọ ọrụ dị na aka dị.
Dị ka ndị na-eduga ọzụzụ na ahịa anyị maara na nke a bụ isi ọrụ ọ bụla ọkachamara ike anyanwụ chọrọ ịma. Mgbe ị gara onwa dị mkpa ịkwesiri ike ịchịkọta mkpa ike nke ike nke onye ahịa gị na nsonaazụ a maka ọkwa dị nkpa mana ndụmọdụ ọdịnala nke nwere ike ịchekwa ego onye ahịa gị na ego ike ha. Nyochaa nke uto nke anyanwụ bu otu n’ime ihe ndi mmadu na erite ahia gi aka. N'ihi ya, ọ bụ oge kachasị mma iji wuo ndị ahịa na-enwe ntụkwasị obi na gị maka ọkwa ike ka ị wee nwee ike iwe akwụkwọ ahụ.
Agbakwunyere na ihe nlere anya nke Oru ike Odogwu bu ihe izizi maka nghota kwesiri sistem. Ihe omuma a natara site na nyocha nke ike anyanwụ nke oma puru iche ndi di iche n’enwe obi uto bu ndi egboro mkpa ya na nke enweghi obi uto.
Akwadoro nkuzi ndị ọzọ
Bykwụ na Bykwụ Solar - Mụta otu esi eji obi ike wụnye sistemụ ike anyanwụ zuru oke
Anyanwụ Ahịa Ahịa - Atụmatụ azụmaahịa & usoro esi azụ nke igbe ahụ
1 nyochaa maka Oku Auditing Oku
Solar Energy Auditing Online Course na-enye gị ohere ngwa ngwa iji nweta mkpokọta ikike gị na mkpụmkpụ akwụkwọ mkpesa Solar Energy ma nweta ntụkwasị obi iji mezue akwụkwọ nyocha nke ike anyanwụ.
Igodo nke Njikọ Batrị
Solar sistemụ MElọ oriri na ọ MEụ MEụ MEGA 20kW - 72 PV